Ubhekene nenkiyankiya uMiss SA
UYAQHUBEKA nokwanda umsindo wokuthi intokazi ephethe isicoco sikaMiss SA uLalela Mswane ingalubhadi kwa-Israel lapho kuzoba khona uMiss Universe njengoba ne-ANC isisamukele isinqumo sokuhoxa kukahulumeni angawuxhasi lo mcimbi. Isithombe; SIGCINIWE
Intatheli Yesolezwe | November 16, 2021
UMHLAZIYI wezepolitiki, uSolwazi Bheki Mngomezulu ozinze eNyuvesi yaseWestern Cape, uthi uMiss SA okunguLalela Mswane ubhekene nenkiyankiya yokuthi kumele akhethe phakathi kwekusasa lakhe nezwe lakhe.
Uthe yena ngokwakhe uthi le ntokazi esencane kumele ithathe isinqumo esiphusile, ingalandeli ekutshelwa ngabahleli bomcimbi kaMiss SA ngoba banezinhloso zabo.
Uthe yize uLalela engaba nentshisekelo yokuyomela elakuleli emcimbini ozoba e-Israel ngoDisemba kodwa uma engagcina eyile, lokho kungamdonsela amanzi ngomsele.
“Siyazi ukuthi kuningi angakuhlomula uma engenela, mhlawumbe, egcina esithathile nesicoco kodwa ngenxa yemithetho elawula izwe, angase azakhele isigcwagcwa uma esebuya kuleli emuva komuncinciswano. Athole ukuthi abekho abafuna ukuphinde basebenze naye. Ngaphandle kwalokho, ukuhamba kwakhe kungalimaza nesithunzi sakhe, ngakho ngiyamuzwela kakhulu ngoba kuningi okusengcupheni,” kusho uMngomezulu.
I-ANC) isinxuse inhlangano ehlela uMiss SA, iNine-Squared ukuthi izwe izikhalo zabantu bakuleli ngodaba oluthinta umcimbi kaMiss Universe ozoba kwa-Israel.
Kuhlukene imibono kubantu bakuleli ngekhwelo lokuthi uMiss SA uLalela Mswane angayi kulo mcimbi ozoba ngoDisemba kwa-Israel okuyizwe elinomlando wokuba nobandlululo.
UPule Mabe okhulumela i-ANC uthe ubandlululo, ukunganakwa kwamalungelo abantu nokunye yikhona okumele kwenze le nhlangano ingaqhubeki nokusa uLalela kulo mcimbi.
“Lezi zizathu nje zizodwa singabambelela kuzo ukuthi le ntokazi ingalubhadi kulo mcimbi. Sikhumbula izikhathi ezibuhlungu zakudala la abantu abamnyama babengavumelekile ukuthi bangenele imicimbi efana nalena. Sinomlando omubi wobandlululo ngomcimbi kaMiss SA, nowenza kubaluleke ukuthi siziqhelise nomcimbi kaMiss Universe walo nyaka,” kusho uPule.
Uthe uma kunjena bakhumbula isigameko sika-1976, lapho amazwe angu-9 aduba ukungenela uMiss World, njengoba elalukeli lalingavumelekile ukuba yingxenye yalo mcimbi ngenxa yobandlululo.
“Izinhlangano zabo kanjalo nazo lezi zintokazi zakhetha ukuziqhelisa nalo mcimbi nathi singakwenza lokho. ULalela ungubuso bale nhlangano, uzosolwa kakhulu yena uma engaqhubeka nokuba yingxenye yalo mcimbi, ngakho nathi siyamxusa ukuthi aphume angabi yingxenye yomcimbi -uyobe enze into enhle. Siyacela umphathi wakhe uStephanie Weil nabo bonke abasebenzi benkampani ehlela uMiss South Africa i bayeseke le ntokazi esinqumeni ezosithatha,” kuchaza uPule.
Ngesonto eledlule le inkampani ehlela uMiss SA yaveza ukuthi ngeke ize igudluke esinqumeni sayo sokuthi uLalela uzohamba ayomela elakuleli kulo mcimbi.
NgeSonto uhulumeni wakuleli umemezele ukuthi ngeke umeseke uLalela uma inkampani ehlela uMiss SA iqhubeka nokumhambisa ayomela elakuleli kuMiss Universe.
Inhlangano i#Africa4Palestine elwa nokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu kwa-Israel ithe iyasamukela isinqumo sikahulumeni.